Tag: Yaman | Sagal Radio Services
Akhriso Taariiqda Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Salax oo la diley
Sagal Radio Services • News Report • December 4, 2017
Qaramada Midoobey oo warbixin ka soo saartay duqeyn lagu diley Qaxooti Soomaali ah
Baaritaan ay sameysay qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in xulafada ay hogaamiso Boqortoyada Sacudi Carabiya ay mas’uul ka ahaayeen 42 Soomaali ah oo lagu diley xeebaha dalka Yemen bishii March ee sanadkan.
Britain oo ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha Sacuudiga ka wado Yemen
Dowladda Britain ayaa ku baaqday in baaritaan munaasib ah lagu sameeyo weerarada cirka ee Sacuudiga ka wado dalka deriska la ah ee Yemen, iyadoo weeraradan ay ku dhinteen dad fara badan oo Rayid ay ku jiraan.
Soomaalida ka soo qaxday Yemen oo bilowday inay dib ugu laabato Mukallah
Qaar kamid ah qoysas Soomaali ah oo ka soo cararay deegaano ka mid ah dalka Yemen ayaa bilaabay inay dib ugu laabataan deegaanadoodii kadib markii ciidamada dowlada ay dib ula waregeen..
Hogaamiyihii Al-Qaacidada Yemen oo lagu dilay duqeyn ay fulisay diyaarad Drone ah
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in Hogaamiyihii Al-Qaacidada Jaziiratul Carab Nasser al-Wuhayshi lagu dilay weerar ay fulisay diyaarada aan duuliyaha laheyn ee Drones ee uu leeyahay Mareykanka.
Dowlada Yemen iyo Xuutiyiinta oo toddobaadka soo socda ku kulmaya Geneva
Qaramada Midoobay ayaa u qabatay waqti cayiman shir ay isugu imanayaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen iyadoo ay weli socoto duqeyn ay diyaaradaha huwanta ku qaadayaan magaalada Sanca.
Dagaalyahano ka tirsan Daacish oo markii u horeysay ka soo muuqday dalka Yemen (Sawirro)
Kooxda Khilaafada Islaamka ama Daacish ayaa markii u horeysay ka soo muuqatay dalka ay dagaalada ka holcayaan ee Yemen, kadib muuqaal ay soo bandhigtay.
Wararkii ugu dambeeyay ee colaada ka jirta dalka Yemen
Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Yemen ayaa sheegaya in 100 ruux ay ku geeriyoodeen dagaal qaraar oo ku dhex maray koonfurta dalkaas ciidamada Shiicada ah ee Xuutiyiinta iyo ciidamada taageeraya madaxweynaha dalka Yemen Al Hadi.
Wasiir ka tirsan Yemen oo ugu baaqay dowladaha Khaliijka fara gelin milateri
Wasaaradda Arrimaha Dibada ee Yemen ayaa ugu baaqday dowladaha Khaliijka inay soo fara geliyaan xaalada dalka, iyadoo jabhada Xuutiyiinta ay horumaro ka sameynayaan dagaalka Koofurta Yemen.
Xoogaga Xuutiyiinta oo la wareegay magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Yemen
Xoogaga Xuutiyiinta Shiicada ah ayaa maanta la wareegay qeybo badan oo ka mid ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Yemen ee Ticis.
Maraykanka oo ciidamadiisii ugu dambeeyay ka saaraya dalka Yemen
Dowlada Maraykanka ayaa ka daadgureynaysa 100 askari oo ah kuwa howlgalada gaarka ah fuliya dalka Yemen kadib markii ay sii xumaaday xaalaa ammaanka dalka Yemen.
Yemen: Daacish oo sheegatay qaraxyadii Ismiidaaminta ee ka dhacay labo Masaajid
Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyada weeraro is qarxin ah oo jimcihii shalay ka dhacay labo masaajid ku yaala Caasimada Sanca ee dalka Yemen.
Sagal Radio Services • News Report • February 8, 2015
Madaxweynaha Yemen iyo Ra’iisul Wasaarihiisa oo is casilay
Madaxweynaha Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Khaled Baha ayaa iska casilay xilka madaxtinimada dalkaas, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Yemen.
Soomaali badan oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Al-Qaacida oo lagu xiray magaalada Sanca
Soomaali badan oo ku nool magaalada Sanca ee dalka Yemen ayaa waxaa xabsiga u taxaabay ciidamada ammaanka ee dalkaas, kadib markii lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Ururka Al-Qaacida.
Daraasiin qof oo ku dhintay qarax ka dhacay Caasimada Yemen ee Sanca
Daraasiin qof ayaa ku dhimatay, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen, kadib markii gaari uu ku qarxay banaanka Kuleej ay leeyihiin Ciidamada Booliska magaalada Sanca ee caasimada Yemen.
Qarax ka dhacay Dalka Yaman oo sababay Dhimasho iyo dhaawac soo gaaray Dad Soomaaliyeed
Wararka ka imaanaya Magaalada Sanca ee Dalka Yaman ayaa sheegaya in Duleedka Magaaladaasi uu ka dhacay qarax qasaaro isugu jira Dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyay Tahriibayaal Soomaaliyeed oo kusugaa Dalkaasi.